साहित्य Archives - Tufan Media News
को-कति भाग्यमानि ? कानबाटै थाहा पाउनुहोस् !
काठमाडौँ । आजसम्म त कानको काम सुन्ने मात्र हो भन्ने सोच्नुभएको छ होला । तर समुन्द्रसास्त्रको मान्यता अनुसार कानका आधारमा मानिसको भाग्य निर्धारीत हुने बताइएको छ । यसैगरी कानकै आधारमा मानिसको ब्यक्तित्व पनि निर्धारण हुने बताईएको छ । यसैकारण तपाईपनि आफ्नो कान ऐनामा हेरेर आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ । समुन्द्रशास्...
घरमा के को फोटो राख्ने के को नराख्ने यसको बारेमा बास्तुशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । यदि तपाईको घरमा पनि श्रीमान श्रीमतीबीचमा मनमुटाव हुन्छ भने सुत्ने कोठामा यी ५ फोटोहरु राख्नु पर्छ । १. यदि श्रीमान र श्रीमतीको बीचमा त’नाव उत्पन भईराख्छ भने आफू सुत्ने कोठामा राधा कृष्णको फोटो राख्नुपर्छ २. यदि आफ्नो घरमा झग’डा नपरोस् र...
अपमान, न्याय–अन्याय, बदला तथा विध्वङ्स लगायत केही यस्ता शब्द हाम्रो दिमागमा आउँछन्, जब हामी ‘महाभारत’ नाम सुन्छौं । महाभारतका हरेक चरित्रका आ–आफ्नै कथा छन् । हरेक भूमिकाको व्यक्तित्व उनीहरुको परिस्थिति, पुर्नजन्म आदि तत्वबाट प्रभावित भएका हुन्छन् । ति भूमिकासँग तपाई आफूलाई जोडेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । यसको अतिरिक्त मह...
भरतपुर / चितवनको रामपुरमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणार्थ सञ्चालन गरिएको धनधान्याञ्चल महोत्सवमा सङ्कलन भएको रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । रङ्गशाला निर्माणस्थलमा आयोजित कार्यक्रममा महायज्ञ आयोजक मूल समारोह समितिका संयोजक तथा बाग्मती प्रदेशका सांसद विजय सुवेदीले धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनका अध्यक्ष सी...
काठमाडौं । आज राती साँढे ११ बजेदेखि बिहान पौने ३ बजेसम्म चन्द्र ग्र हरण लाग्ने भएको छ । जसलाई पेनम्ब्रल चन्द्र ग्र हण भनिन्छ । नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अनुसार सन् २०२०को दोस्रो पेनम्ब्रल साढे ११ बजेदेखि सुरू भई १ बजेर ९ मिनेटमा मध्य हुनेछ भने २ बजेर ४९ मिनेटमा सकिनेछ । यो चन्द्रग्रहण खग्रास वा खण्डग्रासभन्दा भिन्न...
राजा ज्ञानेन्द्रकी नातीनी पूर्णीका शाहको छोटो कथाः ‘खुसी केलाई मा’न्ने?’
एक महिलाले बजारबाट नयाँ भाँडाकुँडाहरू किनेर ल्याइन् । उनले आफ्नो भान्छा कोठाको सबै पुरानो भाँडाकुँडाहरूलाई निकालेर कुनामा थुपारिन् र त्यसको ठाउँमा नयाँ भाँडाकुँडाहरूलाई सजाइन । महिला आफ्नो भान्छा कोठालाई हेरेर मुसुक्क मुस्काइन किनकि उनलाई आज आफ्नो भान्छा कोठा एकदमै बिशेष लाग्यो ! अर्को दिन बिहान कामवाली आइन् ! कामवाली...
यौ’न सम्प’र्कका बेला महिलाहरुले यी १२ कुरा सोच्छन्
यौ’न सम्ब’न्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । प्रायः महिलाहरू आफ्नो पार्टनरसँग मात्र यौ’नस’म्पर्क राख्न रुचाउँछन् । यौ’न स’म्बन्धले महिला र पुरुषविचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउँछ भनिन्छ, तर कतिपयको भने यौ’नस’म्पर्क पछिको सम्बन्धमा विचलन भएको पनि पाइन्छ । यौ’नस’म्पर्कपछि महिलाहरूले आफ्नो पुरुष साथ...
२०७७ साल व‌ैशाख १ गते ५ कुरा अनिवार्य घरमा राख्नुहाेस शुभ हुनेछ भिडियो सहित हेर्नुहोस
२०७७ साल व‌ैशाख १ गते ५ कुरा अनिवार्य घरमा राख्नुहाेस शुभ हुनेछ भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा रहेको छ । यो समाचार पनि पढ्नुहोस दक्षिण एशियामा को रोना : ३८३ जनाको मृ त्यु, १३ हजारभन्दा बढी सं क्रमित काठमाडौँ । विश्वभर म हामारी बनेको को रोनाले विस्तारै दक्षिण एशियामा समेत फै लिने क्रम देखाएको छ । दक्षिण एशियामा को रोना...
घरमा भित्र्याउनुहोस् यी ९ चिज, चम्किने छ भाग्य, के के हुन् त ति चिज पुरा पढ्नुहोस
हरेक व्यक्तिको चाहना हुन्छ की पूरा वर्ष खुसीले भरियोस्। धन सम्पत्ति आदी कुराको कहिलै कमी महशुस नहोस्। यदी तपाई पनि यही चाहना राख्नु हुन्छ भने केही यस्ता चिजका बारेमा आज हामी तपाईलाई जानकारी गराउँदै छौँ। जुन चिज घरमा राख्दा भाग्य चम्किाउने विश्वास गरिन्छ। यी सबै चिज धनकी देवी लक्ष्मीसँग जोडिएका छन्। यी मध्ये कुनै एक चि...
शुक्रबारको दिन लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पूजा गरे मिल्ने छ यस्तो लाभ…
आज शुक्रबार हिन्दूधर्मावलम्बीले सन्तोषी माता र वैभव लक्ष्मीको उपासना गर्दछन् । शुक्रबारको दिन सन्तोषी माता र लक्ष्मीको पूजाआराधना गरे तपाईंको घरमा धनका साथै समृद्धि लाभ हुनेछ । माता लक्ष्मीको व्रत बसी विधिवत रुपमा पूजा आराधना गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । जसले जीवनभर तपाईंको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन सहयोग पुर्‍याउ...